ရေချိုးခန်းနှင့်အတူအိတ်ဆောင်မိုဘိုင်း Prefab ကွန်တိန်နာအိမ် (ကွန်တိန်နာမူလစာမျက်နှာ) - တရုတ် Qingdao Xinmao ZT သံမဏိ
ကွန်တိန်နာအိမ်စခန်း / အဆောင်
နေအိမ် / အားလပ်ရက်အိမ်တော်အဘို့ကွန်တိန်နာအိမ်
စားသောက်ဆိုင် / ဟိုတယ်၌
Sandwich က Panel များ
သံမဏိ Frame ကပေါင်းစုံထပ်တိုက်အဆောက်အဦး
Shopping Mall များအတွက်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံ
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ / ဂိုဒေါင်
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ / စက်ရုံများအတွက်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံ
flat pack ကိုကွန်တိန်နာအိမ်သူအိမ်သား
အဆောင် / appartment
သံမဏိ Frame ကဖွဲ့စည်းပုံအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအဆောက်အ
ရေချိုးခန်းနှင့်အတူအိတ်ဆောင်မိုဘိုင်း Prefab ကွန်တိန်နာအိမ် ...
ရေချိုးခန်းနှင့်အတူအိတ်ဆောင်မိုဘိုင်း Prefab ကွန်တိန်နာအိမ် (ကွန်တိန်နာမူလစာမျက်နှာ)
ဖော်ပြချက်: ရွေ့ပြောင်းခရီးဆောင်ကွန်တိန်နာအိမ်သူအိမ်သားအတိအကျကွန်တိန်နာတင်ပို့၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့နောက်ပြတင်းပေါက်များ, တံခါးရွက်နှစ်ရွက်, အခင်း, မျက်နှာကျက်နှင့်အခြားအပိုဆောင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ facilitated, နံရံနဲ့အိမ်ခေါင်မိုးများအတွက်ဘောင်နှင့်သားညှပ်ပေါင်မု panel ကအဖြစ် prefab အလင်းသံမဏိလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအာဏာနှင့်အလင်းရောင်နှင့်အတူတပ်ဆင်နေကြသည်နှင့်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန် accessorized နိုင်ပါသည်။ သံမဏိနှင့်ဂ၏နိဒါန်းအဘို့အဝန်ကြီးအဖွဲ့ယူနစ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ...
ဆိပ်ကမ်း: Qingdao, ရှန်ဟိုင်း, Ningbo
modular ခရီးဆောင်ကွန်တိန်နာအိမ်သူအိမ်သားအတိအကျကွန်တိန်နာတင်ပို့၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့နောက်ပြတင်းပေါက်များ, တံခါးရွက်နှစ်ရွက်, အခင်း, မျက်နှာကျက်နှင့်အခြားအပိုဆောင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ facilitated, နံရံနဲ့အိမ်ခေါင်မိုးများအတွက်ဘောင်နှင့်သားညှပ်ပေါင်မု panel ကအဖြစ် prefab အလင်းသံမဏိလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအာဏာနှင့်အလင်းရောင်နှင့်အတူတပ်ဆင်နေကြသည်နှင့်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန် accessorized နိုင်ပါသည်။ သံမဏိနှင့်စံအစိတ်အပိုင်းများကိုတက်စေရန်အတူတကွ welded အအေး-ဖွဲ့စည်းခဲ့သံမဏိ၏နိဒါန်းအဘို့အဝန်ကြီးအဖွဲ့ယူနစ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ အိမ်သူအိမ်သားပဲကိုယ့်တဦးတည်းယူနစ်အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသို့မဟုတ်အများအပြားသေတ္တာများအနေဖြင့်တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်, ထိုကဲ့သို့သောသော့ခလောက်အဖြစ်ရိုးရှင်းကွန်နက်ရှင်အားဖြင့်နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် install လုပ်ပြီးသားများနှင့် disassembled ခံရဖို့လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်စွာပါပဲ။
ဤစီမံကိန်းစပိန်နိုင်ငံတွင်နေရာချထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဝေးသည့်ဆူညံမြို့ မှစ. , တောင်ကြီးတောင်ငယ်အိုင်ကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ 49 သင်္ဘောကွန်တိန်နာများထားရှိရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခေတ်မီဒီဇိုင်းအိမ်တော်ကိုကြော့နှင့်အသက်ရှင်ရန်အဆင်ပြေကြည့်ရှုစေသည်။ အထဲတွင်အားလပ်ရက် Haveing ​​အလွန်ပျူငှါနွေးထွေးသောဖြစ်နှင့်အပန်းဖြေရမည်ဖြစ်သည်။
20FT / 40FT ရွေ့ပြောင်းအိတ်ဆောင် ကွန်တိန်နာအိမ် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ပြင်ပအရွယ်အစား 6058mm (L ကို) * 2438mm (W) * 2591mm (H ကို) / 12116mm (L ကို) * 2438mm (W) * 2591mm (H)
ခေါင်မိုး panel က ရော့ခ်သိုးမွှေး / EPS သားညှပ်ပေါင်မု panel ကို (ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ)
Panel ကို ရော့ခ်သိုးမွှေး / EPS သားညှပ်ပေါင်မု panel ကို (ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ)
ပြတင်းပေါက် PVC လျှောပြတင်းပေါက် သို့မဟုတ်လူမီနီယံအလွိုင်းဒိုးကိုသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်သံမဏိပြတင်းပေါက်
တံခါးပေါက် Streel သားညှပ်ပေါင်မု panel ကို သို့မဟုတ်လူမီနီယံဘောင်သားညှပ်ပေါင်မု panel ကတံခါးကို။
မမှန်သောမျက်နှာကျက် PVC မျက်နှာကျက်
လျှပ်စစ်မီး sys2အလင်းအိမ် & 1 switch ကို
optional ဆက်စပ်ပစ္စည်း စသည်တို့ကိုအိုးအိမ်လူနေမှု, ရုံး, အဆောင်, အိမ်သာ, မီးဖိုချောင်, ရေချိုးခန်း, ပန်းရေချိုးခန်း, အဘို့ပရိဘောဂ
လြှောကျလှာ Living အိမ်, ရုံး, အဆောင်, carport, ဆိုင်, တဲ, ကို kiosk, အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း, စစ်သုံးအိုးခွက်, etc
ကွန်တိန်နာအိမ်၏အမိုး, အောက်ခြေဘောင်, ကော်လံများနှင့်မြို့ရိုးအပြားအရှင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသံအတိုးအကျယ်အသေးအဖွဲ, Flat-ထုပ်ပိုးဖြစ်, အလွယ်တကူ site ပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်အကူးအပြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုရလိမ့်မည်။
dimension- 5850mm * 2250mm * 2500mm နှင့်အတူကွန်တိန်နာအိမ်သူအိမ်သားစုဝေးတစ်ခုမှာ 40FT HC ဝန်2စုံကို
(2) Flat-pack ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး:
Plan ကိုဖြေတစ်ခုမှာ 20FT မိသားစုဆရာဝန်ဝန်4အစုံပေ 20 ကွန်တိန်နာအိမ်များ
တစ်ခုမှာ 40FT: B ကိုစီစဉ် HC ဝန် 8 အစုံပေ 20 ကွန်တိန်နာအိမ်သူအိမ်သားသို့မဟုတ်4အစုံ 40 ခွကေိုကွန်တိန်နာအိမ်သူအိမ်သား။
အားလုံးပြား PE ရုပ်ရှင်နှင့်ရက်ခါးပတ်နှင့်အတူ warped သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူကာကွယ်ထားပါသည်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းစက္ကူသေတ္တာသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့ထုပ်ပိုးလိမ့်မည်။ Windows နှင့်တံခါးများကိုသစ်သားသေတ္တာတွေနဲ့ထုပ်ပိုးလိမ့်မည်။
Qingdao Xinmao ZT သံမဏိဆောက်လုပ်ရေး Co. , Ltd မှကုမ္ပဏီရေတွင်း-ထူထောင်ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ကြုံတွေ့နှင့်အထူးပြု ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်အဘိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသော prefab အိမ်များနှင့်ကွန်တိန်နာအိမ်များထုတ်လုပ်ပါတယ်။ 2003 ၏တစ်နှစ်ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 50 R & D ဝန်ထမ်းများထက် ပို. ပို. ထက် 400 လုပ်သားကြီးတွေကစျေးကွက်ဝေစုရရှိရန်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနိုင်ငံတကာ ISO9001 ၏အရည်အသွေးလက်မှတ်နှင့်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဆောက်လုပ်ရေးအရည်အချင်းလက်မှတ်အဆင့် II ကိုရယူပေးခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခု: One of Hottest for Container Home Quotes - Prefabricated Steel Workshop Building Warehouse Steel Structure Design and Manufacture – Xinmao ZT Steel Construction Co., Ltd.
20 ပြား Pack ကိုကွန်တိန်နာအိမ်
ကွန်တိန်နာအိမ် 40 Ft
ချဲ့ထွင် Prefab ကွန်တိန်နာအိမ်
Flat Pack ကိုစျေးပေါတဲ့ကွန်တိန်နာအိမ်
တိုက်ခန်း Pack ကိုကွန်တိန်နာအိမ်
Flat Pack ကို Conta ရောင်းရန် iner အိမ်
High Quality 20ft ကွန်တိန်နာအိမ်
20 FT သိန်ဘို့သင်္ဘောကွန်တိန်နာအိမ်ပြင်ဆင်ထားသော ...
အကြံအဖန်တွေချည်းဆိုက်ကိုတပ်ဆင်သင်္ဘော Contai ...
မီးဖိုချောင်, ဝနှင့်အတူ flat Pack ကို 20FT ကွန်တိန်နာအိမ် ...
စမတ်အကြံအဖန်တွေချည်းမိုဘိုင်းသင်္ဘောကွန်တိန်နာ H ကို ...
ခေတ်သစ် Sandwich က Panel ကိုစီးပွားရေးဇုန် Flat Pack ကို Prefab ...
Prefab Prefab Flat Pack ကိုကွန်တိန်နာအိမ် Ind များအတွက် ...
Ltd. , Qingdao Xinmao ZT သံမဏိ Construction Co. ,